आइपीएलः सन्दीप आवद्ध दिल्लीमा को–को छन् स्टार खेलाडी? - Everest Dainik - News from Nepal
आइपीएलः सन्दीप आवद्ध दिल्लीमा को–को छन् स्टार खेलाडी?
काठमाडौं, फागुन २० । इन्डियन प्रिमियर लिग (आइपीएल) शुरु हुन १९ दिन मात्र बाँकी छन् । विश्वकै ठूलो क्रिकेट लिग मानिएको आइपीएलमा नेपाली लेग स्पिनर सन्दीप लामिछाने पनि खेल्दै छन् । उनी दिल्ली क्यापिटल्सबाट आइपीएल खेलिरहेका हुन् । गत संस्करणदेखि दिल्लीमा अनुबन्ध भएका सन्दीप अहिले निकै व्यस्त छन् ।
उनी अहिले पाकिस्तान सुपर लिग (पीएसएल) मा खेल्दै छन् । सन्दीपले पीएसएलमा शानदार प्रदर्शन गरिरहेका छन् । उनले यो लिगमा ४ खेलमा १० विकेट लिइसकेका छन् । सन्दीप आवद्ध दिल्लीको पहिलो खेल मुम्बईसँग २४ मार्चमा छ । यी दुवै टिमबीचको खेल साँझ ८ः१५ बजेदेखि शुरु हुनेछ ।
सन्दीप यो वर्ष आइपीएलमा कस्तो प्रदर्शन गर्लान्? यो प्रश्नको जवाफ त आगामी दिनमा भेट्ने नै छौं । तर, उनको टिममा यो पटकको कोको खेलाडी छन्? यो प्रश्नको जवाफ भने दिन सकिन्छ । कोको छन् त सन्दीप आवद्ध दिल्लीमा स्टार खेलाडी? हेर्नुस् नाम–
याे पनि पढ्नुस मोदीले सन्दीप लामिछानेको नाम लिएपछि...
याे पनि पढ्नुस टी–१० लिगमा अहिले सन्दीप र अफ्रिदीको टिम भिड्दै